Izixhobo zeMozulu: Izixhobo ezisetyenziselwa ukulinganisa ihlabathi lezulu
Izixhobo eziphambili zoMlinganiselo weMozulu
Izixhobo zemozulu zixhobo ezisetyenziselwa izenzululwazi zezulu ukuba zitshintshise isimo semoya, okanye senza ntoni, ngexesha elithile.
Ngokungafani namakhemikhali, izazi zezinto eziphilayo, kunye ne-physicists, i-meteorologists ayisebenzisi ezi zixhobo kwilebhu. Esikhundleni saloo nto, sibabeka ngaphandle ngaphandle kwezinto ezivelayo, ezidibeneyo, zinika umfanekiso opheleleyo weemeko zemozulu. Ngezantsi uluhlu lwabaqalayo lwezixhobo ezisemgangathweni zemozulu ezifumaneka kwizikhululo zemozulu kunye nantoni na nganye.
Incinci, isitulo sezulu sendawo. UTerry Wilson / E + / Getty Izithombe
I-Anemometers zixhobo ezisetyenziselwa ukulinganisa imimoya .
Nangona iinjongo ezisisiseko zenziwe ngumculi waseNtaliyane uLeon Battista Alberti malunga ne-1450, i-anemometer yekombe yayingagqibekanga kwaze kwaba ngama-1900. Namhlanje, iintlobo ezimbini ze-anemometers zisetyenziswa rhoqo:
i-anemometer yeekomityi ezintathu, ezenza isivinini somoya siphumelele ngokubhekiselele kwindlela yokuhamba kwevili kunye nelo lwakhiwo lwemoya ukusuka ekutshintshiseni kwimoya yesondo; kwaye
zine-anemometers, ezineempembelelo ekupheleni komlinganiselo wokulinganisela isivinini somoya kunye nomsila kwenye ukulungiselela ulawulo lomoya.
I-barometer isisitya sezulu esisetyenziselwa ukulinganisa uxinzelelo lomoya. Kwizinto ezimbini eziphambili ze-barometers, i- mercury kunye ne- aneroid , i-anodeid isetyenziswa kakhulu. Iibharometers zeDamitha, ezisetyenziselwa ukuguquguqula umbane, zisetyenziswe kwizikhululo zemozulu ezisemthethweni.
I-physicist yaseTaliyane u-Evangelista Torricelli ubizwa ngokuba ngu-inventor barometer ngo-1643.
Petra SchrambAhmer / Getty Izithombe
Ama-thermometers, enye yezoxhobo zemozulu eyaziwayo kakhulu, izixhobo ezisetyenziselwa ukulinganisa ubushushu bomoya .
Iyunithi ye-SI (ngamazwe ngamazwe) weqondo lokushisa yi-degrees Celcius, kodwa e-US sibhala amaqondo okushisa kuma-degrees Fahrenheit.
Okokuqala kwakhiwa ngo-1755 nguSwitzerland "indoda yokuvuselela" uJohan Heinrich Lambert, i-hygrometer isixhobo esilinganisa umthamo womoya (umswakama).
I-Hygrometers iza kuzo zonke iintlobo, kuquka:
iinwele ze-hygrometers, ezinxulumene nenguqu ebude bomntu okanye inwele yezilwanyana (enokubambisana kunye namanzi athathakayo) kutshintsho kumngcipheko; kwaye
i-psychrometers ye-sling, apho i-thermometers ezimbini (enye eyomileyo kunye ehambelana namanzi) ihlaselwa emoyeni.
Kakade, njengokuba kunjalo kwizinto ezininzi zemozulu zanamhlanje ezisebenzisiweyo, i-hygrometer ye-digital ikhethwa. Izixhobo zalo zogesi zitshintsha ngokumalunga nomgangatho wokunyusa emoyeni.
Ukuba unesilinganiselo semvula esikolweni sakho, ikhaya, okanye i-ofisi uyazi ukuba lilinganisa: ukutywala kwamanzi.
Nangona iirekhodi zokuqala zemvula eyaziwayo zibuyela kumaGrike aseMandulo kunye nama-500 BC, ukulinganisa kokuqala kwemvula kwakungakhange kuphuhliswe kwaye kusetyenziswe ukufika ngo-1441 nguJoseon Dynasty waseKorea. Naliphi na indlela oyinqumle ngayo, i-gauge ye-rain isele phakathi kwezixhobo zemozulu ezindala kunazo zonke.
Nangona kukho imodeli yokulinganisa imvula, iindawo ezisetyenzisiweyo kakhulu ziquka iigraji zamanzi eziqhelekileyo kunye namanqanaba okuvula amanzi ebhakethi (oko kuthiwa ngokuba uhleli kwi-container-like likeer that tips over and outs out whenever a certain amount of precipitation falls into ).
Ibhaluni ikhutshwa kwi-South Pole ukwenzela ukulinganisa amanqanaba e-ozone. NOAA
Ibhaluni lesimo sezulu okanye ukuvakala kwindlela yesimo sezulu esithathayo esithwala izitya kwiindawo eziphezulu ezingakwazi ukurekhoda ukuqwalaselwa kweempawu zemozulu (njengengcinezelo yemoya, ukushisa, umswakama, kunye nemimoya), ngoko ibuyisela le datha ngexesha layo yendiza. Iqukethe ibhaluni ye-helium okanye i-hydroxy-full-ball egciniweyo ye-helium okanye i-hydroxy-filled pack (i-radioosonde) ekhupha iisayili, kunye neparachute ehambayo ihamba nge-radiosonde emhlabathini ukuze ifumaneke, ichaneke, kunye kwakhona.
Iibhaluni zemozulu ziqaliswe kwiindawo ezingaphezu kwe-500 emhlabeni jikelele kabini ngosuku, ngokuqhelekileyo kwi- 00 Z ne-12 Z.
I-Satellites ingaba yindawo ehamba phambili ye-polar (ukumboza uMhlaba kwiphepha elingasenyakatho-ngasentla) okanye ukuhamba ngaphezu kwelinye indawo (empuma-ntshona-ntshona). Uhlelo lwe-COMET (UCAR)
Iipatellithi zemozulu zisetyenziselwa ukujonga nokuqokelela idatha malunga nemozulu yomhlaba kunye nesimo sezulu. Ziziphi iintlobo zezinto ezithethwa ngama-satellite satellites? Amafu, i-wildfire, ikhuselo lekhephu, kunye namaqondo okushisa olwandle ukuze kuthiwa ezimbalwa.
Njengoko uphahla okanye iindawo eziphakamileyo zeentaba zinikeza umbono obanzi ngeenxa zonke zakho, indawo ye-satelites indawo ephindwe ngamakhulu amabini eekhilomitha ngaphaya komhlaba ivumela ukubonwa kwemozulu kwiindawo ezininzi. Lo mbono owandisiweyo uphinde uncede izixhobo zeemeteorologist iinkqubo zesimo sezulu kunye neepatheni iiyure ukuya kwiintsuku ngaphambi kokuba zifunyenwe zixhobo zokugcina izinto, njengemvula yezulu .
I-radar yemozulu iyisimboli esibalulekileyo sezulu esisetyenziselwa ukufumana imvula, ukubala ukunyuswa kwayo, kwaye uqikelele uhlobo lwayo (imvula, iqhwa, isichotho) kunye nobukhulu (ukukhanya okanye ubunzima).
Eyasetyenziswa okokuqala ngexesha leMfazwe Yehlabathi II njengendlela yokukhusela, i-radar yachongwa njengethuluzi lezenzululwazi xa abasebenzi bezempi bebona "ingxolo" ngokukhawuleza kwiimbonakalo zabo ze-radar. Namhlanje, i-radar iyisisombululo esibalulekileyo sokubikezela ukuchithwa kweemvula ezinxulumene neendudumo, iindwangu, kunye neziphepho zasebusika.
Ngomhla ka-2013, iNkonzo yeSizwe yeMozulu yaqalisa ukuphucula i-rapars yayo yeDoppler kunye nobuchwepheshe be-polarityisation. Ezi "radar" zithumela kwaye zithola izimpembelelo ezingezantsi kunye nezamawundu (i-radar eqhelekileyo iyithumela ngaphandle) ebonisa ukucaca okucacileyo, emibini-imifanekiso yento ephuma ngaphandle, kuba yimvula, isichotho, umsi, okanye izinto ezindizayo.
I-Absodels / Getty Izithombe
Kukho enye ibaluleke kakhulu yezulu ebonakalayo isilungisa esingazange sichaze ngoku ... iingqondo zabantu!
Izixhobo zezulu ziyimfuneko kwakhona, kodwa azinakuze zithathe indawo yobungcali kunye nokuchazwa komntu. Kungakhathaliseki ukuba yintoni i-app yakho yesimo sezulu, iirekhodi zasemaphandleni zangaphakathi-zangaphandle, okanye ukufikelela kwizixhobo eziphezulu, ungalokothi ulibale ukuyiqinisekisa ngokubhekiselele kwizinto ozijongayo kunye nolwazi "kubomi bokwenene" ngaphandle kwewindow yakho kunye nomnyango.
I-In-Situ kunye ne-Remote Feelings
Izixhobo zemozulu zilapha ngentla zisebenzisa i-in situ okanye indlela yokude yokuqonda. Ukuguqulwa ngokuthi "endaweni," imilinganiselo ye-in situ yilezo ezithathiweyo kwinqaku lebhola (inqwelomoya okanye kwindawo yangasemva). Ngokwahlukileyo, iisenzi ezikude ziqokelela idatha malunga nomoya ukusuka kude.
Ukubala i-Index Index
Ukunene, Ukunene (I-Coriolis Effect)
Umoya oPhakamileyo oPhezulu noPhantsi kweMimoya yeMozulu yansuku zonke
Amafu Aphefumula Imozulu Elikhulu
10 abaPhezulu beMeteorologists
I-Uruk Ixesha laseMesopotamiya: Ukuphakama kwe-Sumer
I-Snowflake Chemistry - Iimpendulo kwiemibuzo eqhelekileyo
Imbali emfutshane kakhulu eTanzania
Imfazwe YaseMelika: iMfazwe yaseCancellorsville
Biography kaGordon Moore
Ukuzalwa kukaMoses: Inkcazo yeBali yeBhayibhile
I-College College ye-Arts Admissions
Ukudlala njani iCadd9 Chord kwiGititar
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe yaseMagdaba